I-china synthetic mica powder mveliso kunye nabathengisi | IHuajing
Ngerabha Grade Mica Powder
Umba Umbala Mhlophe (ilebhu) Ubungakanani bamasuntswana D90 (μm) Zokuvala Ucoceko (%) Izinto eziziMagnetic (ppm) Imithombo yobutyebi （%） I-LOI (650 ℃) PH Phawula
Mica Powder yokwenziwa
I-HCD-200 mhlophe Iindleko ze-96 60 Ephakamileyo kakhulu Ukuyalela Iimali ezingama-50 ＜ 0.5 0.1 7.6 UkuSebenza okuPhezulu
I-HCD-400 mhlophe Iindleko ze-96 48 Ephakamileyo kakhulu Ukuyalela Iimali ezingama-50 ＜ 0.5 0.1 7.6
HCW-200 Mhlophe qwa Iimali ezingama-98 65 Ephakamileyo kakhulu Ukuyalela ＜ 20 ＜ 0.5 0.1 7.6 Imveliso yokuPhelisa ephezulu
HCW-400 Mhlophe qwa Iimali ezingama-98 50 Ephakamileyo kakhulu Ukuyalela ＜ 20 ＜ 0.5 0.1 7.6
HCW-600 Mhlophe qwa Iimali ezingama-98 25 Ephakamileyo kakhulu Ukuyalela ＜ 20 ＜ 0.5 0.1 7.6
Indawo yeHCW-1250 Mhlophe qwa Iimali ezingama-98 15 Ephakamileyo kakhulu Ukuyalela ＜ 20 ＜ 0.5 0.1 7.6
Ukusetyenziswa intsimi yerabha, mica ikakhulu ithatha ithuba ubume-ntathu mica ngokwayo, ebonelela isiphumo esihle ekuqiniseni iimveliso zerabha. Iipropati zendalo ezifanelekileyo zokugquma, zibonelela ngokusebenza kakuhle kombane kwirabha yokugquma Sebenzisa uncedo kuthintelo lwephepha le-mica, yonyusa ukuqina komoya; Inxalenye inokuthi ithathe indawo yesilica, yintoni ebonelela ngesisombululo esinye sezoqoqosho kwizinto zerabha ezidityanisiweyo; Ukuxhathisa kwe-shear kunye nokuxhathisa kwe-abrasion, kuphucula ukumelana ne-abrasion ehlala ixesha elide yerabha enganyangekiyo. Smooth kunye nesiphumo esibonakalayo esibonakalayo sinikezela ngeempawu ezilungileyo zokuzahlula ekubunjeni.
Umahluko ophambili wePropathi phakathi kweMicrosoft Synthetic Mica kunye neMicrosoft yeNdalo
1. I-mica yokwenziwa ayiqulathanga ihydroxyl (OH) -, kunye nokuqina kwayo okuphezulu kunye nokuzinza kwe-thermal kuphezulu kunaleyo yendalo mica, kwaye ubushushu benkonzo bu malunga ne-1100 ℃. I-fluorophlogopite ibola kancinci ngaphezulu kwe-1200 ℃, kwaye ubushushu obunyibilikayo be-fluorophlogopite bumalunga ne-1375 ± 5 ℃. Obona bushushu busebenzayo kwimicah yendalo: Muscovite 550 ℃; I-Muscovite 800 ℃ (i-Muscovite yendalo iqala ukubola kwi-450 ℃ kwaye iphantse yaphelela kwi-900 ℃; I-Muscovite iqala ukubola kwi-750 ℃, kunye nokwehla kobunzima ngaphezulu kwe-900 ℃). Iindidi zeMic ziyakwazi ukwahlula ngokufudumeza okuphezulu okanye umahluko wohlalutyo lobushushu.
2. I-mica eyenziweyo inobunyulu obuncinci kunye nokungafihli. Ngaphandle kokuba ubulukhuni bayo bungaphezulu kancinci kunaleyo yendalo mica, ezinye iipropathi zoomatshini, ukufakelwa kombane kunye neepropathi zokukhupha izixhobo ze-mica zokwenziwa zibhetele kunezo ze-mica yendalo. I-mica eyenziweyo inokutshintsha ngokupheleleyo imicah yendalo kwaye luhlobo olutsha lwezinto ezinobushushu ezinganyangekiyo ezineempawu ezizodwa nezigqwesileyo.
Egqithileyo Mica yendalo
I-Mica Flake yokwenziwa